လူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ ဒုစရိုက်မှုကျူးလွန်သူတွေက မိမိတို့ရဲ့အသက်အန္တာရာယ်ကိုပါ ထိခိုက်လာပါက တရားခံများ သေဆုံးသည်အထိ မိမိကိုယ်မိမိခုခံကာကွယ်နိုင်သည့်ဥပဒေ - Myanamr Express
လူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ ဒုစရိုက်မှုကျူးလွန်သူတွေက မိမိတို့ရဲ့အသက်အန္တာရာယ်ကိုပါ ထိခိုက်လာပါက တရားခံများ သေဆုံးသည်အထိ မိမိကိုယ်မိမိခုခံကာကွယ်နိုင်သည့်ဥပဒေ
ဒုစရိုက်မှုကျူးလွန်သူတွေက မိမိတို့ရဲ့အသက် အန္တာရာယ်ကိုပါ ထိခိုက်လာပါက တရားခံများသေဆုံးသည်အထိ မိမိကိုယ်မိမိခုခံကာကွယ်နိုင်ပါကြောင်းများများသိအောင် Share ပေးပါ
တရားရုံးများသည် ရာဇဝတ်မှုများ၌တရားခံအနေဖြင့်ကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့်အရကျူးလွန်ရခြင်း ဖြစ်သည်ဟုထုချေသည်ဖြစ်စေ မထုချေသည်ဖြစ်စေရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၉၆ ၏ကင်းလွတ်ချက်အရ အကျုံးဝင်ပါကတရားခံအပေါ်ပြစ်ဒဏ်မှ သက်သာခွင့်ပြုနိုင်သည်။(မောင်သိုင်းနှင့် နိုင်ငံတော်၊ ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊BLR)
လူတစ်ဦးက ရန်မူလာလျှင် ထွက်ပြေးရန်မလို။ရပ်တန့်၍ ခုခံနိုင်သည်။ရန်မူသူက မိမိအား ထပ်မံ၍ရန်မမူနိင်သည့်ထိခုခံနိုင်သည်။မိမိကိုယ်ကို မခုခံဘဲ ထွက်ပြေးရမည်ဟုဥပဒေတွင် မရှိ။(မောင်ကတုံးနှင့်နိုင်ငံတော်၊ ၁၉၄၈ ၊BLR)
ပထွေးကမိခင်ကို ဆေးလိပ်မီးဖြင့်ထိုးရာတွင်သမီးဖြစ်သူက ဒဏ်ရာရမည်စိုး၍ ပထွေးအားဓားဖြင်ခုတ်ခဲ့သောကြောင့် ပထွေးမှာဦးခေါင်းဒဏ်ရာ ရကာ ဆေးရုံ၂ ကြိမ်တက်ပြီးနောက် သေဆုံးခဲ့သည့် လူသတ်မှုဖြစ်သည်။
လူတစ်ဦးက အားနွဲ့သူအပေါ်ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်းပြုလုပ်လျှင်ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၉၇ အရခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အတွင်း ကျရောက်၍ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်မှုအား ပယ်ဖျက်သည်။(မတင်မြင့်နှင့်နိုင်ငံတော်၊ ၁၉၆၆ ခုနှစ်၊ ရုံးချုပ်)
သေသူက စတင်ရန်မူပြီး သုံးတောင့်ထိုးလက်နှိပ်ဓာတ်မီးဖြင့် 4/5ချက် ရိုက်၍တရားခံက ထင်ချောင်းဖြင့်တစ်ချက်ရိုက်၍ထွက်ပြေးကြောင်း ပေါ်ပေါက်သည်။
တရားခံသည် မလျော်အခွင့်အရေးသုံးကြောင်းမပေါ်ပေါက်သဖြင့်ကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့်အတွင်းပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်၍ ပြစ်မှု မမြောက်။(မန်းမော်ကေးနှင့် နိုငိငံတော်၊ ၁၉၇၉၊ရုံးချုပ်)
လူတစ်ဦး ရန်မူခံနေရသည့်အခါ ပွဲကြည့်သူတစ်ဦးကဲ့သို့ ခေါင်းအေးအေးထားပြီး တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်မည်ကဲ့သို့ ပြုလုပ်ရမည်ကို တွေးတောချိနိဆနေရန်အချိနိရမည် မဟုတ်ပေ
။တရားခံသည် မိမိအား ရန်မူသူကိုမြေကြီးပေါ်က လွတ်ကျသွားသည့်ရန်သူ၏ဓားဖြင့်တစ်ချက်ပြန်ခုတ်လိုက်ခြင်းသည်ဥပဒေကခွင့်ပြုထားသောကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့်အတွင်း ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။(မောင်အောင်ရှင်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ၁၉၇၁၊ ရုံးချုပ်)
သို့ဖြစ်၍ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ ၉၆ပုဒ်မ ၉၇ ပုဒ်မ ၉၈ ပုဒ္မ ၁၀၀ပုဒ္မ ၁၀၃ တို့အရမိမိအသက်ခန္ဓာနှင့် တခြာသူများ၏အသက်ခန္ဓာအိုးအိမ်စည်းစိမ်းအတွက်အသက်သေစေသည့်အထိကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။
း ခံရလျှင်ကျူးလွန်သည့် မည်သူကိုမဆိုအသက်သေစေသည့်အထိရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၁၀၀ အရကာကွယ်ခုခံနိုင်ပါသည်။
ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်၍ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၁၀၃ အရအောက်ပါအခြေအနေများတွင်ကျူးလွန်သူ၏အသက် သေစေသည်အထိကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့်ရရှိပါသည်။
၂. ညအခါ ဖောက်ထွင်းမှု
၃. အဆောက်အဦအား မီးဖြင့် အကျိုးဖျက်ဆီးမှု
၄. မကာကွယ်လျှင် သေဘေးသို့မဟုတ်အပြင်းမထန်နာကျင်စေမည့်ခိုးမှု အကျိုးဖျက်ဆီးမှု အိမ်ကျော်နင်းမှုစသည့် ပြုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်အားကျူးလွန်ခြင်းခံရပါက
သို့ဖြစ်၍မိမိနှင့်တစ်ပါးသူများအားရန်မူထိခိုက်လာပါကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရန် မလိုဘဲဥပဒေအရ ကာကွယ်ခုခံနိုင်ပါကြောင်းဖော်ပြအပ်ပါသည်။
(sawsayWar – facebook မှ)ပြန်လည်မျှဝေပါသည်။
လေးစားစွာဖြင့် ခရစ်ဒက် …… SH ဦးဝင်းဗိုလ် သင်္ဃန်းကျွန်း
လူတိုငျးသိထားသငျ့တဲ့ ဒုစရိုကျမှုကြူးလှနျသူတှကေ မိမိတို့ရဲ့အသကျအန်တာရာယျကိုပါ ထိခိုကျလာပါက တရားခံမြား သဆေုံးသညျအထိ မိမိကိုယျမိမိခုခံကာကှယျနိုငျသညျ့ဥပဒေ
ဒုစရိုကျမှုကြူးလှနျသူတှကေ မိမိတို့ရဲ့အသကျ အန်တာရာယျကိုပါ ထိခိုကျလာပါက တရားခံမြားသဆေုံးသညျအထိ မိမိကိုယျမိမိခုခံကာကှယျနိုငျပါကွောငျးမြားမြားသိအောငျ Share ပေးပါ
တရားရုံးမြားသညျ ရာဇဝတျမှုမြား၌တရားခံအနဖွေငျ့ကာကှယျခုခံပိုငျခှငျ့အရကြူးလှနျရခွငျး ဖွဈသညျဟုထုခသြေညျဖွဈစေ မထုခသြေညျဖွဈစရောဇသတျကွီးပုဒျမ ၉၆ ၏ကငျးလှတျခကျြအရ အကြုံးဝငျပါကတရားခံအပျေါပွဈဒဏျမှ သကျသာခှငျ့ပွုနိုငျသညျ။(မောငျသိုငျးနှငျ့ နိုငျငံတျော၊ ၁၉၆၂ ခုနှဈ၊BLR)
လူတဈဦးက ရနျမူလာလြှငျ ထှကျပွေးရနျမလို။ရပျတနျ့၍ ခုခံနိုငျသညျ။ရနျမူသူက မိမိအား ထပျမံ၍ရနျမမူနိငျသညျ့ထိခုခံနိုငျသညျ။မိမိကိုယျကို မခုခံဘဲ ထှကျပွေးရမညျဟုဥပဒတှေငျ မရှိ။(မောငျကတုံးနှငျ့နိုငျငံတျော၊ ၁၉၄၈ ၊BLR)
ပထှေးကမိခငျကို ဆေးလိပျမီးဖွငျ့ထိုးရာတှငျသမီးဖွဈသူက ဒဏျရာရမညျစိုး၍ ပထှေးအားဓားဖွငျခုတျခဲ့သောကွောငျ့ ပထှေးမှာဦးခေါငျးဒဏျရာ ရကာ ဆေးရုံ၂ ကွိမျတကျပွီးနောကျ သဆေုံးခဲ့သညျ့ လူသတျမှုဖွဈသညျ။
လူတဈဦးက အားနှဲ့သူအပျေါကွီးနိုငျငယျညှငျးပွုလုပျလြှငျရာဇသတျကွီးပုဒျမ ၉၇ အရခုခံကာကှယျပိုငျခှငျ့အတှငျး ကရြောကျ၍ပွဈမှုထငျရှားစီရငျမှုအား ပယျဖကျြသညျ။(မတငျမွငျ့နှငျ့နိုငျငံတျော၊ ၁၉၆၆ ခုနှဈ၊ ရုံးခြုပျ)
သသေူက စတငျရနျမူပွီး သုံးတောငျ့ထိုးလကျနှိပျဓာတျမီးဖွငျ့ 4/5ခကျြ ရိုကျ၍တရားခံက ထငျခြောငျးဖွငျ့တဈခကျြရိုကျ၍ထှကျပွေးကွောငျး ပျေါပေါကျသညျ။
တရားခံသညျ မလြျောအခှငျ့အရေးသုံးကွောငျးမပျေါပေါကျသဖွငျ့ကာကှယျခုခံပိုငျခှငျ့အတှငျးပွုလုပျခွငျးဖွဈ၍ ပွဈမှု မမွောကျ။(မနျးမျောကေးနှငျ့ နိုငိငံတျော၊ ၁၉၇၉၊ရုံးခြုပျ)
လူတဈဦး ရနျမူခံနရေသညျ့အခါ ပှဲကွညျ့သူတဈဦးကဲ့သို့ ခေါငျးအေးအေးထားပွီး တဈဆငျ့ပွီးတဈဆငျ့မညျကဲ့သို့ ပွုလုပျရမညျကို တှေးတောခြိနိဆနရေနျအခြိနိရမညျ မဟုတျပေ
။တရားခံသညျ မိမိအား ရနျမူသူကိုမွကွေီးပျေါက လှတျကသြှားသညျ့ရနျသူ၏ဓားဖွငျ့တဈခကျြပွနျခုတျလိုကျခွငျးသညျဥပဒကေခှငျ့ပွုထားသောကာကှယျခုခံပိုငျခှငျ့အတှငျး ပွုလုပျခွငျးဖွဈသညျ။(မောငျအောငျရှငျနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံ၊ ၁၉၇၁၊ ရုံးခြုပျ)
သို့ဖွဈ၍ရာဇသတျကွီးဥပဒပေုဒျမ ၉၆ပုဒျမ ၉၇ ပုဒျမ ၉၈ ပုဒ်မ ၁၀၀ပုဒ်မ ၁၀၃ တို့အရမိမိအသကျခန်ဓာနှငျ့ တခွာသူမြား၏အသကျခန်ဓာအိုးအိမျစညျးစိမျးအတှကျအသကျသစေသေညျ့အထိကာကှယျခုခံပိုငျခှငျ့ရှိပါသညျ။
း ခံရလြှငျကြူးလှနျသညျ့ မညျသူကိုမဆိုအသကျသစေသေညျ့အထိရာဇသတျကွီးပုဒျမ ၁၀၀ အရကာကှယျခုခံနိုငျပါသညျ။
ပစ်စညျးနှငျ့ပတျသကျ၍ရာဇသတျကွီးပုဒျမ ၁၀၃ အရအောကျပါအခွအေနမြေားတှငျကြူးလှနျသူ၏အသကျ သစေသေညျအထိကာကှယျခုခံပိုငျခှငျ့ရရှိပါသညျ။
၂. ညအခါ ဖောကျထှငျးမှု
၃. အဆောကျအဦအား မီးဖွငျ့ အကြိုးဖကျြဆီးမှု
၄. မကာကှယျလြှငျ သဘေေးသို့မဟုတျအပွငျးမထနျနာကငျြစမေညျ့ခိုးမှု အကြိုးဖကျြဆီးမှု အိမျကြျောနငျးမှုစသညျ့ ပွုလုပျမှုတဈရပျရပျအားကြူးလှနျခွငျးခံရပါက
သို့ဖွဈ၍မိမိနှငျ့တဈပါးသူမြားအားရနျမူထိခိုကျလာပါကထှကျပွေးတိမျးရှောငျရနျ မလိုဘဲဥပဒအေရ ကာကှယျခုခံနိုငျပါကွောငျးဖျောပွအပျပါသညျ။
(sawsayWar – facebook မှ)ပွနျလညျမြှဝပေါသညျ။
လေးစားစှာဖွငျ့ ခရဈဒကျ …… SH ဦးဝငျးဗိုလျ သင်ျဃနျးကြှနျး
February 24, 2020 Pwint Linnဗဟုသုတဒုစရိုက်, ဥပဒေ
Previous Post ပြိုင်ဘက်အိန္ဒိယကစားသမားကို အနိုင်ယူကာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ရွှေတံဆိပ်ဆုတစ်ခု ထပ်မံရယူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ကြက်တောင်မယ် သက်ထားသူဇာ
Next Post ညအိပ်မပျော်တဲ့ရက်တွေများလာရင် သင့်ခန္ဒာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ဆိုးကျိုး (7) ခု